Mustaqbalka qandaraasyada is-fulinta iyadoo la adeegsanayo Blockchain | Martech Zone
Ka waran haddii qandaraasyadu si otomaatig ah isu fulin karaan haddii shuruudaha qaarkood la buuxiyo? Ingraphicgraphic this, Awoodda Qandaraasyada Casriga ah ee Xannibaadda, Etherparty wuxuu sharxayaa sida aysan tani mustaqbal ahayn - Qandaraasyada smart ayaa noqonaya xaqiiqda. Qandaraasyada caqliga lihi waxay ka qaadi karaan dabeecadda shakhsiga ah ee u qalmidda qandaraaska iyo gorgortanka gacmaha kuwa go'aanka gaaraya, taas oo siinaysa fursado aan caadi ahayn oo dhinacyada ay ku xidhayaan heshiisyo ku habboon dhinac kasta - marka loo eego kharashka, kalsoonida, iyo fulinta.
Haddii aad rabto maqaal qoto dheer oo ku saabsan tiknoolajiyada Blockchain iyo Cryptocurrency, waan kugula talin lahaa CB Insights warqad cad.
Waa maxay Teknolojiyada Blockchain
Waa maxay Qandaraaska Casriga ah?
Etherparty, oo ah aalad qandaraas caqli abuur leh oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay ku abuuraan qandaraasyo caqli-gal ah wax kasta oo xannibaya is-waafajinta, wuxuu qeexayaa heshiiska casriga ah sida soo socota:
Sida magacu tilmaamayo, qandaraasyada caqliga badan waxay ku shaqeeyaan jihada luqadda koodhka, iyaga oo u oggolaanaya iyaga shaqeynaya oo meesha ka saara baahida loo qabo xirfadaha barnaamijyada aadanaha ee ka baxsan tilmaamaha asalka u ah. Hawlaha qandaraasku waxay u saamaxaysaa laba dhinac inay ku shaqeeyaan heshiis dijitaal ah oo la xoojiyay, mararka qaarkoodna waxay ka saareysaa baahida loo qabo dhexdhexaadiyeyaasha ama qareennada. Qandaraasyada caqliga lihi waxay ku saleysan yihiin natiijada, iyadoo luuqaddooda koodhku ay ku dhammaystirayaan waxqabadyada loo qoondeeyey.
Laakiin qandaraasyada caqliga badan waxay bixiyaan wax badan oo ka badan magacooda; Miisaankooda khalkhalka ayaa ka fog laba hay'adood oo raadinaya inay heshiis rasmi ah ka dhigaan. Qandaraasyada caqliga leh waxay leeyihiin waxqabad si loo fududeeyo loona cabbiro geeddi-socodka iyo nidaamyada is-madax-bannaan, si wax-ku-ool ah looga wareejiyo xogta laga helo hal hay'ad loona wareejiyo mid kale iyada oo aan la carqaladeyn ama la carqaladeyn processor-ka gacanta. Dabeecadda aaminka ah ee shabakadaha loo qaybiyey tiknoolajiyada xannibaadda iyo baloogyada waqti-shaabadaysan ayaa iyagu naftooda khalkhal galiya, laakiin waa astaamaha tiknoolajiyadda lagu garto xogta gaarka ah ee ka dhigaysa mid kacaan ku ah ganacsiyada maanta u baahan cid saddexaad oo wax ka iibisa.
Infographic-kaani wuxuu sharraxayaa farsamada, habka, faa'iidooyinka, qiimaha, iyo kakanaanta Qandaraasyada Casriga ah ee loo yaqaan 'Blockchain'.
Tags: blockchaintechnology blockchaincb fikradahaabtirsiinethereumqandaraasyo qoto dheerWaa maxay blockchain